dhiri: tora iyo 32gb iphone 6 ine pa & t prepaid sevhisi ye $ 199.99
Kuru Nhau & Ongororo Bata: Tora iyo 32GB iPhone 6 ine AT & T prepaid sevhisi ye $ 199.99
Bata: Tora iyo 32GB iPhone 6 ine AT & T prepaid sevhisi ye $ 199.99
Isu & maapos; tinogona pamwe mwedzi kubva pane zvakaratidzwa zve maPhones matsva , asi izvo & maapos zvinokwana mamwe madhiri mashoma pane mamwe eApple mafoni mafoni. Kana iwe usina & apos; usinga zive, Kutenga Kwakanyanya kuri kuita kusimudzira pane iyo iPhone 7 uye iPhone 7 Plus, asi vatengi vanogona zvakare kuwana mamwe maApple & apos; s iPads emitengo iri nani.
Asi kana iwe usingakwanise & apos; t kutenga iyo iPhone 7 kana 7 Plus, kunyangwe kana ivo & apos; vadzoserwa, heino chimwe chibvumirano pane yekare iPhone modhi inogona kukodzera bhajeti yako. Iyo iPhone 6 iri kutengeswa kwenguva yakati wandei paBest Buy uko vatengi vanogona kuiwana iyo chete $ 199.99.
Sezvo iyo Iphone 6 kazhinji inotengesa madhora mazana matatu, iwe & apos; uchange uchichengetedza $ 100 kana iwe ukatenga iyo iPhone 6 kuburikidza ne Best Buy. Iko & apos; s inobata zvakadaro, sezvo Best Buy ichingotengesa iyo AT & T prepaid vhezheni ye iPhone 6 32GB (Space Grey).
Kana iwe ukafunga kuenda kune Best Buy & apos; s chibvumirano, ungangoda kutarisa kwedu kuzere iPhone 6 kuongorora kune rumwe ruzivo rwakadzama nezve Apple & apos; s smartphone.
Tenga iyo iPhone 6 ne32GB paKutenga Kwakanyanya
3 nzira dzekutamisa mafaera kubva kuPC yako kuenda kuPad ​​(2021)
Maitiro ekuvharira app uye browser kushambadzira pane iyo Galaxy S5 isina mudzi
Inochinjika kubva kuAndroid kuenda kuIOS svondo rapfuura; izvi ndizvo zvandakawana kusvika ikozvino
Samsung ine mhinduro dzevashandisi veApple kutumira kune yakasvibira bubble vanovenga
Iyo nyowani Portraits Tarisa Chiso cheApple Watch inowanikwa ikozvino nekusunungurwa kwewatchOS 8 beta 2
Maitiro ekuisa vhidhiyo lockscreen pane iyo Galaxy S10, S10 +, kana S10e